कोइरालाको आक्रोशः पदाधिकारीको बैठक लगातार बस्ने तर महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु नहुने के चाला हो ? « Image Khabar
कोइरालाको आक्रोशः पदाधिकारीको बैठक लगातार बस्ने तर महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु नहुने के चाला हो ?
Imagekhabar १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १२:३३
काठमाडौं, साउन १४ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्वको रवैयाप्रति आक्रोश पोख्नुभएको छ ।
महाधिवेशन नगराउन खोजेको भन्दै कोइरालाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन ‘एक, दुई, तीन हुन्छ’ भन्दै ठोकुवा गरिरहेका बेला कोइरालाले भने प्रश्न उठाउनुभएको हो ।
लगातारजसो पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरुको बैठक भइरहने तर महाधिवेशनको प्रक्रिया भने नबढाउने के चाला हो भन्ने प्रश्न गर्दै कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको प्रक्रिया जारी छ । तर पूर्व निर्धारित कार्यतालिकाको पालना भएको छैन । अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यको अन्तिम छिनोफानो समेत हुन सकेको छैन । यसले समयसीमा भित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुरामा संशय बढेको छ । र पार्टीको सम्पुर्ण साथीहरुमा गहिरो चिन्ता छाएको छ ।’
कोइरालाको प्रश्न छ, ‘संविधानतः आगामी भाद्र २३ गते पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुँदैछ भन्ने हामीलाई हेक्का छ कि छैन ? पार्टी विधानमै नभएको नयाँ अभ्यास जारी छ, अर्थात पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको निरन्तर बैठक बस्ने तर महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढ्ने यो कस्तो चाला हो ? यसको जवाफ कसले दिने ?’
डा. कोइरालाको प्रश्न छ, लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी कांग्रेसले आफ्नै महाधिवेशन समयमा गर्न नसक्दो दुनीयाँले के भन्ला ? ‘यसबाट हामी उम्कने बाटो छैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासको पाठशाला ठानिने हाम्रो पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन समेत समयभित्र सम्पन्न गर्न सकेन भने आउने पुस्ता, समाज र हाम्रा शुभेच्छुकहरुलाई के जवाफ दिने ?’ तसर्थ पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रिया अविलम्ब सुचालु गरियोस् भन्ने आग्रह छ ।’
नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको प्रक्रिया जारी छ। तर पूर्व निर्धारित कार्यतालिकाको पालना भएको छैन।अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यको अन्तिम छिनोफानो समेत हुन सकेको छैन।यसले समयसीमा भित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुरामा संशय बढेको छ।र पार्टीको सम्पुर्ण साथीहरुमा गहिरो चिन्ता छाएको छ… pic.twitter.com/ZU2P9BeIUA
— Dr Shekhar Koirala (@Shekharnc) July 29, 2021